Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0412 lak
Fanandramana ny famonjena (2)
Alakamisy 25 Okt.
Ny fanandramana ny fanamarinana no mampiditra ireo fahamarinana ara-panahy ho ao anatin’ny fiainan’ny mpino, ary ireo no mitondra fiovana eo amin’ny fiainany. Ao amin’ny fanamarinana no ahazoan’ny mpanota famelan-keloka (Lio. 7:47, Efes. 1:7, Rôm. 4:7), afaka amin’ny fanamelohana noho ny ota izy ka heverina ho marina (Rôm. 5:16,18; Rôm. 8:1), ary mandray ny fanomezan’ny fiainam-baovao (Efes. 2:1-5; 2 Kôr. 5:17).
Ny fototra iorenan’io fanandramana vaovao io dia ny finoana marina fa hita ho voavela heloka sy madio eo anatrehan’Andriamanitra isika, na manao ahoana lasantsika na manao ahoana, na inona ota vitantsika na inona, ary na toy inona fahadisoana vitantsika na toy inona.
Saintsaino ny hevitr’ity manaraka ity. Manarona ny ota rehetra ny fahafatesan’i Kristy, eny, fa na dia ny ratsy indrindra aza. Na ahoana mety ho fanamelohan’ny fonao anao na ahoana (1 Jao. 3:20), rehefa manolotra ny tenanao ho an’i Kristy amin’ny finoana ianao ary manaiky ny fiainany tsy misy pentina fa tsy ny “lambanao mihoson-drà” (Isa. 64:5), dia amin’izay indrindra ianao no voatafy amin’ny fahamarinan’i Kristy. Voatolotra ho anao ilay fiainany tsy misy tsiny, toy ny hoe anao mihitsy izany. Fanomezana tsy manam-paharoa izany, indrindra indrindra ho an’ny mpanota anankiray!
Izao àry ny fanontaniana mipetraka: Ahoana no hitrangan’ny zavatra toy izany eo amin’ny olona anankiray, kanefa io olona io tsy mety ho voaova tanteraka? Io fiovana io anefa, izay mazàna antsoina hoe “fahateraham-baovao,” dia ampahany lehibe tokoa eo amin’ny fanandramana ny famonjena.
Vakio ireo andininy voalaza eo amin’ny paragrafy ambony ka fintino ny fampianarana omen’izy ireo mikasika ny fanamarinana amin’ny finoana sy ny fomba anandramantsika izany eo amin’ny fiainantsika.
Ny fanandramana ny famelan-keloka dia mampitony ny mety ho fiantefan’ny fahatezeran’Andriamanitra amin’ny mpanota ary manaisotra izay mety ho sakantsakana rehetra eo amin’ny fihavanana sy ny fisakaizan’Andriamanitra amin’ny mpanota. Fiainana vaovao no misokatra ho an’ny mpanota, izay manana ny tombontsoa hiaina ao amin’ny fisakaizana amin’i Kristy, eo ambanin’ny fitarihana sy ny fitantanan’ny Fanahy Masina.
Fepetra tena ilaina eo amin’ny fanandramana ny famelan-keloka sy ny fanamarinana ny fibebahana, ary izany dia arahin’ny fiaiken-keloka sy ny batisa (Asa. 2:38; 1 Jao. 1:9). Io no manazava ny tsy fahazoan’ny rehetra ny famelan-keloka na dia natao ho an’ny rehetra aza ny famelan-keloka.
Aiza ho aiza no hisy anao raha tsy afaka hiantehitra amin’ny teny fikasana na oviana na oviana eo amin’ny fiainanao ianao, teny fikasana izay milaza fa miorina eo amin’izay nataon’i Jesôsy ho anao ny faneken’Andriamanitra anao fa tsy amin’ny tenanao na ny zava-tsoa vitanao na koa ny fitandremanao ny lalàna?